बीस-प्रथम शताब्दीमा कार, लामो यातायातका केवल एक साधन भएनन् छ। अब शानदार वाहन को उपस्थिति यसको मालिक को उच्च स्थिति दर्साउँछ।
आजको कार सबै उन्नत प्रविधि संग सुसज्जित छन्। मोटर वाहन संसारमा प्रतियोगिता धेरै गाह्रो भएको छ। कारहरुको लागि मांग मा वृद्धि संग विश्वव्यापी, प्रत्येक सवारीसाधान ब्रान्डहरु को डिजाइनर र ईन्जिनियरहरु एक अद्वितीय "फलाम घोडा" बनाउन प्रयास गर्छन्।
कारहरुको लागि मांग पनि वृद्धि द्वारा समर्थित छ, र नयाँ वाहन खरिद ग्राहक प्राप्त यदि एक ग्यारेन्टी अवधि , वा सेवा, एक कार, मूलतः सबै आफ्नै खर्च मा गरेको समस्या खरीद द्वारा समर्थित छ। अक्सर यो सेवा सैलून मा वाहन परीक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण छ, मूलतः यो जरूरी चेसिस र ब्रेक सिस्टम जाँच गर्न छ।
सम्पूर्ण ब्रेक लगान सिस्टम नै सरल छ, समस्या Hoses मा हुन गर्छन। प्रकाश चर्किएको अन्ततः व्यापक बन्न र मोटरहाक्ने व्यक्ति को सुरक्षा असर गर्न सक्छ, जो, दुःखी नतिजा गर्न सक्छ। ब्रेक hoses र तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन त्यसैले महंगा छैनन्।
निम्न समारोह, को ब्रेक लगान सिस्टम सम्बन्धी, यो छ ब्रेक पैड को प्रतिस्थापन। को ब्रेक पैड त गर्न अक्सर छैन कसरी परिवर्तन गर्न त, यो हरेक उच्च गुणवत्ता स्नेहक प्रयोग तिनीहरूलाई विस्थापन गर्न उचित छ। यो चालक समाचार हुनेछ असम्भाव्य छ, कसरी ब्रेक calipers लागि महत्त्वपूर्ण स्नेहक।
धेरै आधुनिक वाहन कि देखाउन सेन्सर साथ सुसज्जित -board कम्प्युटर, को ब्रेक लगान सिस्टम को अवस्था। यो कारखाना प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई विस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ, तर धन को कमी एक कम लागत तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर जूता को उच्च गुणस्तरीय मोडेल।
जर्मन र जापानी उत्पादन को भाग रूपमा सिफारिस गरियो। सामान्यतया, सामान्य ड्राइभिङ समयमा तिनीहरूले 20-30 हजार किलोमिटर, मेशिन अब मार्गहरू मा संचालित छ भने हो, राम्रो गुणवत्ता जूता तपाईं र अप 45-50 हजार किलोमिटर गर्न सेवा गर्नेछन्।
एक स्वरमा व्यवसायी वसन्त Strut वा लीवर तिनीहरूलाई सुरक्षित, को ब्रेक calipers लागि स्नेहक एक निलम्बित मोड मा आयोजित हुनुपर्छ भनेर भन्न (आधारमा मिसिन नै ब्रान्ड को विविधता मा)
यो आवश्यक छ र यो तिनीहरूले भविष्यमा ड्राइभिङ र ब्रेक डिस्क बिगार्छ देखि, समय मा पैड परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
प्रक्रिया नै तिनीहरूलाई विस्थापन गर्न धेरै सजिलो छ, त्यसैले धेरै ग्यारेज घर मा यो आफैलाई प्रदर्शन। यो के हो? हामीलाई सारा प्रक्रिया सरल स्नेहक व्याख्या गर्न प्रयास गरौं।
पुरानो पाङ्ग्रा र ब्रेक पैड हटाउने पछि पहिलो चरण सफा थाली, पानीका मुहानहरू र दूषण देखि पिन हुनुपर्छ। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण को स्नेहन छ गाइड समर्थन, जो प्याड को अन्त्य हो। प्रश्न एक स्नेहक के हुनुपर्छ, उठ्छ र के यो अझ प्रभावकारी काम गर्न हुनुपर्छ विशेषताहरु? सबै भागहरु एक विशाल तापमान पुग्न पनि घर्षण हुनाले यसलाई पनि एक उच्च डिग्री मा यसको गुण गुमाउन गर्दैन एक स्नेहक लिन आवश्यक छ।
यो caliper गर्न चिल्लो उच्च-तापमान हुनुपर्छ भनेर बाहिर जान्छ। सुरक्षित ड्राइभिङ लागि प्राथमिकता - को caliper धेरै कडा अप गर्मी सक्नुहुन्छ भएकोले कडा तपाईं मरम्मत र सम्पूर्ण ब्रेक सिस्टम को मर्मतका लागि, एक उच्च तापमान, उच्च गुणस्तरीय स्नेहक चयन गर्न सुझाव दिन्छौं।
यस पुस्तिका समर्थन को औंलाहरु खियाले को निशान छ भने, यो तिनीहरूलाई हटाउन आवश्यक छ। समर्थन लागि स्नेहक प्रयोग गर्न मात्र साफ सतह मा।
आफ्नो ठाँउ मा प्याड को अन्त्य राख्न, यो तिनीहरूलाई हल्कासित पीसने गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो विशेषज्ञहरु सम्पर्क र आफ्नो क्षमता मा slightest पक्कै मा मर्मतसम्भार केन्द्र मा परिवर्तन पैड र caliper चिल्लो बनाउन निश्चित हुन आवश्यक छ। कुनै पनि मामला मा उच्च गुणवत्ता र "सही" caliper चिल्लो प्रयोग गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ कि ब्रेक calipers र पैड प्रतिस्थापन लागि स्नेहक - एक सरल प्रक्रिया। प्रतिस्थापन प्याड समयमा गरेको छैन भने, ब्रेक पैड को ब्रेक डिस्क मा मनका सक्छ जो लेपित भागहरु, विरुद्ध RUB। यस मामला मा, यो कलर सानो छ भने, ब्रेक पैड परिवर्तन गर्न, वा यसलाई बनानु आवश्यक छ।
के राम्रो ब्रेक प्याड? ब्रेक पैड को निर्माता: र्याङ्किङ्ग
गोलाकार समर्थन मुनि: एक अवलोकन, को उपकरण, क्षेत्रीय
घर झूमर Chizhevskogo। आफ्नो हात घर हावा ionizer के
क्रेडिट कार्ड "पुनर्जागरण क्रेडिट"